Taabit: Waa ayaan-darro iyo qalbi jab in askartii wax badbaadin lahayd iyagii inay dhimasho sababeen - Jowhar Somali Leader
Home Somali Taabit: Waa ayaan-darro iyo qalbi jab in askartii wax badbaadin lahayd iyagii...
Taabit: Waa ayaan-darro iyo qalbi jab in askartii wax badbaadin lahayd iyagii inay dhimasho sababeen
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ahaana Duqii hore ee Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay dhacdooyinkii shalay iyo habeen hore ka dhacay magaalada Muqdisho ee sababay dilkii askari ka tirsan ciidanka Booliska u geystay labo qof oo shacab ah.
Mr Taabit ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii labada qof ee askariga ku dilay degmada Boondheere, isagoo tilmaamay inuu xanuunka la qeybsanayo qoysaska marxuumiinta.
“Waa ayaan-darro iyo qalbi jab in askartii wax badbaadin lahayd iyagii dhimasho sababeen. Madaama lasoo xiray gacan-ku-dhiiglihii, waxaan rajeynayaa in cadaaladda la waafajiyo, Arrinta Bandoowga waxay u baahan tahay wacyigelin ballaaran iyo inaan la sahashan halista ka dhalan karta bulsho iyo ciidan aan Bandoow horey u arag”ayuu yiri Guddoomiye Taabit.
Taabit oo sii hadlayay ayaa yiri “Dhacdooyinkii shalay iyo habeen hore wax la aqbali karo ma ahan, waana in Madaxda iyo Hay’addaha amnigu wax ka bartaan,kana foggaadaan wax walba oo dadkeena dulqaadka badan wax u dhimi kara”
Ugu dambeyn waxaa uu ugu baaqay shacabka in bandowga oo lagu celiyay 8-da fiidnimo inay u hoggaansamaan, haddii aad aragtaan wax aadan qaadan karina si nabdoon u banaan baxa oo yaan la isku qaldin askari qalad galay iyo astaamaha qaranka.
“Madaxda Qaranka waxaan xusuusinayaa in dadka la dhiso ayaa ka horeysa in dalka la dhisaa, si dadku wax u xeeriyaan waqtiyada adag iyo waqtiyada baraarahaba”ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir.